Mini-LED gadziriro yekugadzira inotanga iPads Pro uye MacBooks | Ndinobva mac
Kugadzirwa kwema miniLED mapaneru ePads Pro uye MacBooks anotanga
Mugadziri weTaiwanese ari kutanga kugadzirwa kwemazhinji mapaneru netekinoroji Mini-akatungamirira yeiyo inotevera Pro Pro, uyezve kune itsva MacBook mamodheru achaburitswa gore rino. Kubudirira kutsva kweApple Silicon.
Yakaimbwa. Iyo yazvino renji rePad Pro yave yechinyakare zvachose, sezvo iyo nyowani yechina-chizvarwa chechina iPad Air yakapinda mumusika muna Gumiguru apfuura. Iwo anozove ekutanga michina yekukwirisa Mini-LED skrini, uye mune inotsvedza, inotevera MacBooks.
DigiTimes achangoburitsa gwaro achitsanangura kuti kambani yeTaiwanese ennorse Kugadzirwa kweMini-LED backlight mapaneru anouya 12,9-inch iPad Pro ichatanga kunonoka mukota yekutanga yegore rino. Mushure mavo, kugadzirwa kwemamwe Mini-LED mapaneru eMacBooks emangwana achatanga.
Ennostar ikambani inobata iyo yakasikwa pamwe chete mwedzi wapfuura nevakagadzira emapaneli eLED Epistar y Lextar Electronics. Ivo vari kubatanidza masimba kutanga kugadzirwa kwemapaneru matsva ne Mini-LED tekinoroji.
Mukufananidza, Apple inotarisirwa kuunza nyowani 12,9-inch iPad Pro ine Mini-LED yekuvhenekera mwenje muhafu yekutanga yegore rino. Epistar ichave yega mutengesi weMini-LED machipisi ayo anozoiswa mukati memwenje yekumashure naLextar, mushumo unodaro. Iyi nguva yekupedzisira yakave nerunyerekupe kakati wandei, iine mimwe mishumo ichicheka kuvhurwa kusvika kune yekutanga kota, saka iyo nyowani iPad Pro inogona kuvhurwa munaKurume.
Apple inogona kutora Mini-LED kudzoreredza kweiyo mitsva yeMacBook mhando izvo zvichaunzwa muhafu yepiri yegore rino, maererano neshumo imwe chete. Izvi zvinowirirana nezvakataurwa nezuro nemuongorori weApple Mig-Chi Kuo.
Kuo anotarisira kuti mhando nyowani dze 14-inch uye 16-inch MacBook Pro kuvhura muhafu yepiri ya2021 neyakagadzirwa nyowani, kudzoka kweHDMI chiteshi uye SD kadhi muverengi, kubviswa kweTouch Bar, uye yechinyakare MagSafe kuchaja netambo yemagetsi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Kugadzirwa kwema miniLED mapaneru ePads Pro uye MacBooks anotanga
Spotify HiFi ichave iri yechokwadi muna 2021
Matambudziko mune mamwe maSDD eMac M1 anogona kutokanganisa komputa yacho pachayo